စိမ့်စမ်းရေ: ပင်ပန်းနေတဲ့ သင့်မျက်လုံးလေးတွေကို အနားပေးပါ။
နေ့စဉ် ကွန်ပြူတာ အသုံးများတဲ့ မျက်လုံးမှာ အဖြစ်များတဲ့ပြဿနာကတော့ မျက်လုံး ကြွက်သားတွေ ချိန်ညှိမှုအား လျှော့နည်းခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်မျက်လုံးကြွက်သားတွေ အဲလိုချိန်ညှိမှုအား လျှော့နည်းနေရင် ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုများသိနိုင်မလဲ? လက္ခဏာကတော့ ကိုယ့်လက်တစ်ကမ်းက အရာတစ်ခုခုကို အာရုံစိုက်ကြည့်ရင် ဝါးသွားလိုက် သေချာကြည့်ရင် ပြန်ကြည်သွားလိုက် ပြန်ဝါးသွားလိုက်ဖြစ်တာပါဘဲ၊
(ဒီနေရာမှာ မျက်စိမှုန်ခြင်းကိုမဆိုလိုပါ၊ မှုန်နေတဲ့မျက်စိက ဝါးပြီး မှုန်သာနေပါသည် ပြန်ကြည်မလာပါ) ဒါဟာဘာကိုပြသလဲဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ အမြင်အာရုံ အားနည်းစပြုနေပြီ ဆိုတာပါဘဲ။
နောက်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ မျက်လုံး တောင့်တင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ကွန်ပြူတာ Screen ကိုကြည့်နေရင်း မျက်လုံးတွေတောင့်တင်းလာတာမျိုးပါ၊
တောင့်တင်းလာတာကြာလာမယ်ဆိုရင်တော့ မျက်လုံးတွေ ယားယံလာမယ်၊ မျက်လုံးတွေခြောက်လာမယ်၊ တခါတရံ အရာဝတ္တုတွေကို နှစ်ကိုယ်ခွဲမြင်ရတတ်သလို တချို့အခြေအနေများမှာ မျက်လုံးရဲ့ အရောင်ခွဲခြားမှုစွမ်းရည်ပါ ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မျက်လုံးတင်းခြင်း လက္ခဏာတွေ ဖြစ်နေတဲ့အချိန် ကြာရှည်လာမယ် ဖြစ်လာတဲ့ အကြိမ်ရေ စိတ်လာမယ် ဆိုရင် သင့်ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရည် ကို တိုက်ရိုက် ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်၊
ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ မျက်လုံးပြဿနာတွေကို ခုဖော်ပြမဲ့ မျက်လုံးလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချနိုင်ပါတယ်၊ ကြိုးစားကြည့်ပါ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အချိန်သီးသန့်ပေးရန်မလိုသလို သင့်အလုပ်ထဲမှာလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်၊
အချိန်နေရာမရွေးကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ကျွန်မတို့အတွက် အဖိုးတန်ပြီး အသုံးဝင်လှတဲ့ မျက်လုံးတွေကို သက်သာသလိုနေစေပြီး သူတို့အတွက် ထိုက်သင့်တဲ့ အနားပေးမှုလေး ပေးကြရအောင်ပါ….
ထိုင်ရက်ပုံစံနဲ့ဘဲ မျက်လုံးကို အပေါ်ကို ငါးစက္ကန့်ကြည့်ပေးပါ၊ အပေါ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာ မျက်နှာကိုအတည့် အနေအထားမပြောင်းဘဲနဲ့ မျက်လုံးကိုဘဲ သင့်ခေါင်းပေါ်မှာဘာပါလိမ့်အတွေးနဲ့ကြည့်သလို အပေါ်ကိုကြည့်နိုင်သလောက်ကြည့်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်၊
နောက်မျက်လုံးကိုခဏလေး မှိတ်ထားလိုက်ပါ၊ နောက်ပြန်ဖွင့်ပြီး အောက်ဖက်ကိုငါးစက္ကန့်ကြည့်ပေးပါ၊ အောက်ဖက်ကိုကြည့်တာမှာလဲ ဒီလိုပါဘဲ မျက်နှာကို အနေအထားမပြောင်းဘဲနဲ့ မျက်လုံးကိုဘဲ သင့်ခြေထောက်မှာ ယင်ကောင်နားနေလားကြည့်သလိုကြည့်ပါ၊ နောက်မျက်လုံးကို ခဏလေးပြန်မှိတ်ထားပါ၊ ဒီလို အထက်အောက်ကြည့်ခြင်းကို ငါးကြိမ်လောက်လုပ်ပေးပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေတုန်းမှာ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပြီး နောက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုမစခင်
မျက်လုံးကိုစက္ကန့် အနည်းငယ် မှိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်ပေးပါ
တခါတရံ မျက်လုံးကို ရေအေးဝတ်ကပ်ပေးပါ။
(ရေခဲတုံးလေးများထည့်သောရေတွင် မွေးပွမျက်နှာသုတ်ပုဝါလေးကိုနှစ် ရေညှစ်ပြီး မျက်လုံးပေါ်တင်ပေးခြင်း ကိုဆိုလိုပါသည်)။
ရေခဲရေ (သို့)ရေခဲများ နှင့် နူးညံ့သော သင့်မျက်လုံးများတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ် သင့်ပါသည်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေက အအေးကြိုက်ပါတယ်၊ မျက်လုံးဟာ လူသားတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးထဲမှာ အအေးဒါဏ် အခံနိုင်ဆုံးသော အစိတ်အပိုင်း လည်းဖြစ်ပါတယ်၊ ကွန်ပြူတာအကြည့်များလို့ခေါင်းကိုက်ရင် ရေအေးဝတ်ကပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမှန်တကယ် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ref: (http://goldenmyanmarparadise.ning.com/profiles/blogs/5620648:BlogPost:1358484 )